Mazuva ese, zviuru zvevaparidzi vanobatsirwa kubva mukudzokorora kwemari mari nekudyidzana pamwe nemamwe makambani kuburikidza nehukama zvirongwa.
Affiliate marketing ndiye mumwe nzira dzakanakisa dzekuita mari yako blog, kunyanya kana iwe usingatengese zvigadzirwa kana masevhisi. Kujoinha chirongwa chekubatana kunogona kukuwanira wega mukana wekuwana zvemukati zvemukati uye akakosha madhiri kune vateereri vako - zvese uku uchikutambira mari yakawanda.
Kuti uwedzere kunzwisisa zvirongwa zvekubatana, ngatitarisei muenzaniso - Wirecutter.com, kambani yeNew York Times, webhusaiti inodonongodza zvigadzirwa zvevatengesi. Wirecutter inowana zvakanyanya komisheni inoenderana nehukama hukama nevatengesi.
Wirecutter's yakabatana chirongwa chingaite kuti iwe unetseke kuvimbika kweye Wirecutter zvinokurudzirwa - asi, kutaura zvazviri, zvakapesana chaizvo. Wirecutter inongoita komisheni kana muverengi atenga chigadzirwa kubva kune yakabatana mutengesi uye haaiti dzokera chigadzirwa. Wirecutter, saka, haina chinokurudzira kusimudzira zvigadzirwa zvakaderera - kana vakadaro, vaizoita mari shoma vodzinga vaverengi.
Kune akawanda marudzi akasiyana ehurongwa hwehukama, kubva pamakosi epamhepo kuenda kune vanovaka webhusaiti kushambadziro uye vanobatana nebhizinesi. Pano, tichaongorora zvirongwa makumi matatu nematanhatu zvine hunyanzvi hwekuwana mari kuti uve nechokwadi chekuti unokwanisa kuita mari kubva pane zvaunopa.
Asi kutanga - chii chaizvo chirongwa chekubatana?
Chii chinonzi Chakabatana Chirongwa?
Zvichitaurwa zviri nyore, chirongwa chekubatana chibvumirano chekuti bhizinesi rinobhadhara rimwe bhizinesi kana kukurudzira ("mubatanidzwa") komisheni yekutumira traffic uye / kana kutengesa nzira yavo.
Izvi zvinogona kuwanikwa kuburikidza newebhu zvemukati, zvemagariro midhiya, kana kubatanidzwa kwechigadzirwa. Mubatanidzwa unowana yakasarudzika chinongedzo ("chakabatana chinongedzo") kubva iko kudzvanya kunogona kuteverwa - kazhinji kushandisa makuki.
Iwe unowanzo sangana nemazwi ekuti "kuki kureba" kana "hupenyu hwecokie", ayo anongotsanangudza kuti kuki ichave ichiteedzera sei zvinoitwa nemushandisi zvepamhepo.
Semuenzaniso, kana kuki ine hupenyu hwemazuva makumi matatu, kutumirwa kwako kunoda kutenga mukati memazuva makumi matatu-ekubaya yako yekubatana link kuti iwe ubhadharwe - zvikasadaro iyo lead haichazotangike.
Vateereri veB2B vanogona kunyanya kukoshesa, nekuti ivo vatengi vakafanana avo vanoda kuisa mazana emadhora pachigadzirwa kana sevhisi inoda vabatsire kuita mari. Iwe ungatadza sei kushandira mari pane izvozvo?
Ehezve, kune akasiyana marudzi ehurongwa hwehukama, uye iwe uchazoda kuve nechokwadi kuti unotora iyo yakanyanya kukodzera-bhizinesi rako. Ngatinyurirei mumhando dzezvirongwa zvakabatana, zvinotevera.
Mhando dzeChirongwa Chemubatanidzwa
Kana iwe uri kutsvaga kusimudzira zvigadzirwa zvako kana masevhisi, kune akatiwandei ehukama mapurogiramu iwe aunogona kufunga. Paunenge uchisarudza chirongwa chehukama, iwe uchazoda kugara uchifunga nzira kana mapuratifomu ayo vateereri vako vanoshandisa yakawanda yenguva yavo - semuenzaniso, mutengi wako persona anowanzo verenga zvinyorwa zvemablogi, scroll Facebook, kana kushandisa injini dzekutsvaga kana uchitsvaga zvigadzirwa?
Neimwe nzira, mutengi wako anotsvaga mumwe munhu anogara achitsvaga chibvumirano chakanaka, uye angafarira chinongedzo pane coupon saiti? Kana ivo vanofarira kuita matani ekutsvaga usati watenga, zvichiita kuti kukurudzira kwako kuve kwakakosha pane yekuongorora saiti?
Nepo iyo iri mibvunzo iwe yaunofanirwa kuzviongorora iwe, ngatitarisei mamwe marudzi akajairika ehurongwa hwehukama kuti ugone kutanga kufunga nezvenzira dzingave dzekushambadzira kwako:
Tsvaga vanobatana: Nechirongwa ichi, iwe unenge uine ma freelancers kana vezvemabhizimusi vanobhadhara yavo mari kusimudzira chako kupa pane zvekutsvaga mhinduro kana mamwe epamhepo ekushambadzira mapuratifomu senge Facebook Kushambadzira. Ipo iwe uchizoda kuona kuti mumwe wako ari kutevera kutsvaga nekushambadzira nhungamiro, izvi zvinogona kushanda mukuda kwako kana mumwe wako aine SEO kumashure uye achida kuA / B kuyedza kuti uone kuti ndedzipi shambadziro dzinoguma nekutumirwa kwakanyanya kwauri - uye zvakanyanya ROI kwavari.
Blogger / influencers:Kana paine mabloggi anoyemurika kana vezvenhau vevanokurudzira munharaunda yako indasitiri vanobatana neako akakodzera mutengi persona nguva dzose, unogona kufunga kubatana navo. Semuenzaniso, kana iwe ukatengesa zvishandiso zvemukicheni, zvingave zvakanaka kusvika kune vanoblogi kana vatambi veYouTube vanotumira mabikirwo, uye wobvunza kana vangaratidza chigadzirwa chako se "chishandiso chakakurudzirwa" mune yavo inotevera yekubheka posvo. Sezvineiwo, izvi zvinoita kuti vateereri vako vatarise webhusaiti yako, uye kana vachida zvigadzirwa zvaunopa, zvinogona kupa imwe mari kune anokurudzira.
Wongorora nzvimbo: Kana iwe ukapa chigadzirwa kana sevhisi inodhura kana niche, zvingangoita kuti vazhinji vevatengi vako vanofanirwa kuita tsvagiridzo pamusoro penyaya iyi vasati vatenga - kana zvirizvo, chingave chiri zano rakanaka kutsvaga nzvimbo dzepamusoro dzekuongorora dzakabatana kune chako chigadzirwa kana sevhisi, uye svikira kune bhizinesi kana munyori akaburitsa chidimbu, achibvunza kana vangazofarira kupa chinongedzo chekubatana kune chako chigadzirwa kana sevhisi mune iwo mavara.
Coupon nzvimbo: Kana iwe uri kupa chigadzirwa nyowani kana sevhisi isingafarirwe mumusika, unogona kuedza kuumba yakabatana kudyidzana ne coupon saiti kwenguva yakaganhurirwa. Kunyange iwe usiri kuda kurasikirwa nemari nekupa chako chigadzirwa kure nemutengo, zvinogona kushanda pakubata vamwe vekutanga-nguva vatengi kuti vatarise webhusaiti yako uye vagova vatsigiri.
Email marketing: Izvi zvakanakisa mune zvidiki zvidiki. Iwe haudi chero vadyidzani vanotumira akawanda maemail kune vatengi vasingafarire zvigadzirwa zvako kana masevhisi, asi nekufunga kwakakodzera kwekuti ndiani ari kugamuchira iyo email, iyi inogona kuve nzira inoshanda. Semuenzaniso, kana iwe ukatengesa dhizaini maturusi, unogona kusvika kune ekushambadzira vamiririri uye wobvunza, kana ivo vari kushanda neakatarirwa mutengi pane dhizaini chirongwa, kunyangwe ivo vangangofunga kutumira URL kubva kune yako saiti mukati memuviri weemail. Izvi zvinogona kubatsira vatengi vavo kuwedzera maturusi ako kuti vagadzire zvemhando yepamusoro zvemukati, uku vachipa vamiririri sosi yekuwedzera yemari.
Tevere, ngationgororei makumi mana nemaviri zvirongwa zvakabatana zvinobhadhara iyo yepamusoro komisheni.
Akanaka Kushambadzira uye Bhizinesi Anobatana Zvirongwa
komisheni: Flat rate - inosvika kumadhora chiuru pachigadzirwa chakatengwa
Cookie hupenyu: 90 mazuva
Basa raHubSpot nderokubatsira mamirioni emasangano kukura zviri nani. Inoumbwa ne Kushambadzira Hub, Kutengesa Hub, Service Hub, Uye yakasimba yemahara CRM, HubSpot's mubairo-unokunda kukura chikuva unopa zviuru zvemakambani maturusi avanoda kubata ruzivo rwevatengi - nzira yese kubva pakuziva kusvika pakukurudzira.
Sehukama hweHubSpot, iyo Commission yaunogamuchira inoenderana neyakagadzirwa chigadzirwa chechigadzirwa chimwe nechimwe chawakatumirwa.
Starter: $ 250
Nyanzvi / CMS: $ 500
Bhizinesi: $ chiuru
Ramba uchifunga kuti iwe unogona kuwana mari inosvika kumadhora chiuru chimwe nechimwe chigadzirwa chakatengwa. Izvo hazvisi zvakajairika kuti vatengi vatenge zvinopfuura chimwe chigadzirwa panguva. Saka, muchokwadi, unogona kuwana mari inosvika zviuru zvitatu zvemadhora kana wako wekutengesa akatenga Enterprise Kukura Suite.
Kana iwe ukajoinha chirongwa cheHubSpot chekubatana, iwe unowana mukana kune hombe yekugadzira hesera, kusanganisira mavhidhiyo edemo, mireza, uye kuteedzera mienzaniso, ese akagadzirirwa kukubatsira iwe kuwana yakanyanya komisheni inogoneka. Uyezve, iwe unogona kukudziridza hukama-ne-humwe nehubhubhu yakabatana timu, avo vese vakazvipira kukubatsira iwe kuti ubudirire.
Kana iwe uine vateereri vebhizinesi rakakura kana kuti uchida kuita mari yako, saka chirongwa chedu chakabatana chingangove chakakukodzera. (Unogona kudzidza zvakawanda nezveHubSpot nekuverenga HubSpot ongororo.)
komisheni: 30% inodzokorora
Cookie hupenyu: Gore rimwechete
AWeber anga ari autoresponder wesarudzo yemamiriyoni anodarika miriyoni emabhizimusi uye vezvemabhizimusi kubvira 1998. Chishandiso chikuru chetsamba uye email kudonha kampeni.
Vakabatana veAWeber vanogona kuwana mari yakakura kuburikidza maviri maviri chiteshi
zvavo mu-imba chirongwa inopa hupenyu hwekupedzisira makumi matatu muzana. Zvirongwa zvinowanzo kubva pamadhora makumi maviri kusvika kumadhora mazana mashanu / mwedzi, saka kubhadhara kunogona kuwedzera.
Neimwe nzira, iwe unogona kuwana kusvika kumadhora mazana matatu paakaundi kuburikidza CJ Affiliate. Nekudaro, hupenyu hwe cookie neiyi sarudzo ndeye mazuva makumi mana nematanhatu, pane gore rimwe.
Cookie hwindo: 30 mazuva
Iyo nyowani yepamusoro-uye-comer mumunda wekushambadzira yeemail, ConvertKit inobatsira vatengi vayo kukura kwavo vatengi-base kuburikidza nemapeji ekutora, mafomu, uye email kudonha nhandare. (Unogona kudzidza zvakawanda nezve ConvertKit nekuverenga wongororo.)
ConvertKit's yakabatana chirongwa chinonyanya kutaurwa kune varipo veConvertKit vashandisi vanonzwa vateereri vavo vanogona kubatsirwa kubva kune email email zvigadzirwa. Chirongwa ichi chinopa hupenyu hwese 30% komisheni kune wese anotumirwa kubhadhara mutengi kana webinar kunyorera.
Nezvirongwa zvinotangira pese kubva pamadhora makumi matatu nemashanu pamwedzi nzira dzese kusvika pamadhora zviuru zviviri, iyo mari inowanikwa ndeyezvinotaridzika kupiwa, uye zvinokubhadharira zvachose chinhu kuti ubatane nechirongwa ichi. Chirongwa ichi hachina, zvakadaro, chinopa chero mitengo yakasarudzika kana zvidzikiso zvechigadzirwa chero chipi chingave chinokurudzirwa.
Cookie hupenyu: 30 mazuva
LeadPages chishandiso chepamhepo chinoita kuti iwe ugadzire mapeji ari nyore kutakura kuti uunganidze ruzivo uye kukwidziridza ako ekushandura mareti. (Iwe unogona kudzidza zvakawanda nezveDirectPages nekuverenga kuongorora.)
Ivo chirongwa chekubatana chinongovhurika kune vatengi vePutPages. Mumwe nemumwe anobhadhara mutengi ataurwa anounza muhupenyu hwekomisheni ye30%. Mitengo yenhengo inotangira pamadhora makumi maviri kusvika pamadhora mazana maviri pamwedzi.
LeadPages dzimwe nguva inomhanya inopihwa zvakakosha, senge mabhonasi emadhora zviuru zvishanu kumabhizinesi avo anotyaira kutengesa gumi+ pazuva rakapihwa. Vemubatanidzwa vese vanowana mukana wekuwana mabhana, mifananidzo yepadivi, uye zvemagariro midhiya-inoshamwaridzana. Iwe zvakare une sarudzo yekugovanisa yakasarudzika kune yakasununguka peji peji (senge blog blog kana vhidhiyo) pane peji yechigadzirwa.
komisheni: 33% inodzokorora
Cookie kureba: 120 mazuva
Pamwe chete nekutengesa email, GetResponse inopa pamapeji, Opt-in mafomu, webinar inomiririra, CRM chishandiso, uye yakawanda zvimwe zvekushambadzira otomatiki maturusi. (Unogona kudzidza zvakawanda nezve GetResponse nekuverenga wongororo.)
Kungofanana neAWeber, GetResponse ine zvirongwa zviviri zvakabatana zvaunogona kusarudza kubva (kana, iwe unogona kujoina zvese!):
zvavo pachako-chakarongwa chirongwa inopa 33% inodzokorodza komisheni. Nezvirongwa zvinotangira pese kubva pamadhora gumi nemashanu kusvika kumadhora 15 / mwedzi, kubhadhara kunogona kuve kwakanyanya.
Iwe unogona zvakare kuwana $ 135 yekutengesa yega yega inonzi CJ Affiliate. Nekudaro, iyo cookie hupenyu inongova mazuva makumi matatu, pane 30 inopihwa muchirongwa chemukati.
komisheni: 40% inodzokorora
Cookie hupenyu: 10 makore
BeRush chirongwa chekubatana cheSEMRush, kambani yeSawaS inonyanya kugadzirisa SEO uye kukwikwidza kuongorora maturusi evashambadzi veadhijitari. Sangano ravo rekubatana rinopa 40% inodzokorora komisheni pamusoro pehupenyu hwese hwekunyorera, iyo inoshandura inosvika kumadhora zana nemakumi matanhatu pamwedzi pakutumirwa. Uyezve, ivo vanopa ane rupo kwazvo gumi-gore kuki hupenyu.
Uyezve, sezvo BeRush ichishanda pasi pekutanga khukodhi sifai, kana munhu aizoendesa ainyora uye kunyora zvakare mune ramangwana (mukati memakore gumi), iwe uchiri kuwana komisheni pane yechipiri kunyoreswa.
Exclusive SEMRush yekusimudzira zvinhu inowanikwa mumitauro mashanu akasiyana uye vanonyorera vanongozvitungamira, saka nzira yekusaina-ingori maminetsi mashoma, ichikugonesa kuti utange ipapo ipapo.
komisheni: $ 15-50 yeFiverr CPA, $ 10 CPA + 10% RevShare yeFiverr Hybrid, kana 30% yega yega Fiverr Dzidza kosi yekuraira.
Fiverr ine zvigadzirwa zvishoma iwe zvaungasimudzira pane yako wega webhusaiti kana bhurogi - inosanganisira Fiverr (iyo yakasununguka yekutengesa nzvimbo neine digital services kune zvese zvese kubva kushambadziro kusvika tech), Fiverr Pro (yekuwana tare-ruoko tarenda yakavimbika nemhando huru), uye Fiverr Dzidza (makosi evatengesi uye emabhizinesi anotarisa kuti awedzere hunyanzvi).
Kana iwe ukashanda nevatengi vangangoda kuroja freelancer yekushambadzira, dhizaini, kana hunyanzvi hwetekinoroji, kana iwe ukanyora bhurogi kune vezvinabhizinesi uye uchida kusimudzira Fiverr Dzidza, ungangoda kufunga kubatana pamwe neFiverr. Iyo saiti inozivikanwa, ine vanopfuura mamirioni mashanu emazana evashandisi, inopa vanobatidzana dhodhi kuti vatarise nekutarisa mashandiro emakambani, uye zvekugadzira zvinhu zvekubatsira iwe kusimudzira mabasa avo Ehe, komisheni inosiyana zvichienderana neshumiro yaunoda kukurudzira - tarisa yavo zvipiriso zvizere pano.
komisheni: 20% yemari inodzokororwa yemutengi wese waunoreva
Iyi inozivikanwa yekumhara peji chikuva - inoshandiswa nemhando dzakadai seCampaign Monitor uye Zola - inobatsira vashandisi kugadzira mapeji anoshandura epamusoro-soro ekumhara emabhizinesi eSawaS, ecommerce saiti, uye vamiririri. Pamusoro pezvo, Unbounce's Affiliate chirongwa chinonakidza, nemukana wekuwana makumi maviri muzana emari inodzokororwa kune mutengi wese waunongedzera kuUnbounce.
Uyezve, vashanyi vesaiti yako kana vateveri venhau vezvemagariro vanowana 20% kubva pamwedzi yavo yekutanga mitatu vachishandisa Unbounce, zvichiita kuti chinjana chikoshe kwavari, zvakare. Unbounce inokupa iwe akawanda maturusi ekuti ubudirire uchishandisa yavo Affiliate chirongwa, kusanganisira Partner murairidzi, tsika dashibhodhi kuteedzera kufambira mberi, uye kudzidziswa uye zvekushambadzira zvinhu kuona kuti uri kusimudzira bhizinesi ravo nemazvo zvinobvira. Kana iwe uri mushambadzi uchitarisira kubatsira vatengi kuwedzera shanduko pamapeji avo ekumhara, kubatana uku kunogona kuve kukunda-kuhwina kwako mese.
komisheni: $ 5 yega yega kutumira iyo inosainira bvunzo yemahara, uye $ 105 kana avo vanotumira vanobhadhara kune account nyowani.
Cookie hupenyu: 120 mazuva
Kugara Kukurukurirana kunopa zvine simba email ekushambadzira maturu emabhizinesi madiki, mabloggi, uye vemabhizinesi. Pakati pezvimwe zvinhu, vashandisi veConstant Contact vanogona kushandisa zvishandiso kugadzira Instagram uye Facebook Ads, voisa yavo yekushambadzira email, kana kunongedza vatengi vatsva ecommerce uye vatumire matsamba ekuteedzera kuti vawedzere mari kuzvitoro zvavo zvepa online.
Iyo purogiramu yemubatanidzwa yekambani inoita kuti iwe ugone kuwana madhora mashanu kune ese anokwanisa kutungamira, uye $ 5 kana kutumirwa kunova mutengi weConstant Contact.
Pamusoro pezvo, iwe unogashira zvekusimudzira zvinhu, yekutevera dashboard, uye yakasarudzika rutsigiro kuti ikubatsire iwe kubudirira nehukama chirongwa. Constant Kubata kunoshandiswa nemhando huru dzinosanganisira Facebook, WordPress, uye Shopify. Kana iwe uchidavira kuti vatengi vako kana tarisiro inogona kubatsirwa neemail kushambadzira maturusi, uku ndiko kudyidzana kwakanaka kwekufunga.
komisheni: 10% kubviswa kunyoreswa; hapana muganho pane zvinotumirwa kuderedzwa
Cookie hupenyu: Hazvizivikanwe
Typeform, iyo inopa mafomu ekukurukurirana uye ongororo dzinosanganisira Mafomu Ekubata, Vashandi Kugutsikana Ongororo, uye Chiitiko Chekutungamira Maforamu, haipe komisheni kune vanotumira, asi kambani inobvisa 10% kubva kuaccount yako kana mumwe wako waunonyorera akanyorera kune yakabhadharwa. kuronga. Izvi zvinoreva kuti, nekutumirwa gumi, unogona kutora yako Typeform bhiri kusvika zero madhora.
Pamusoro pezvo, zvakakosha kuti uzive - yako dhisikaundi haipere. Iwe ucharamba uchingogamuchira gumi% kubva pakubhadharisa kwako kwese kutumirwa kunojoinha Typeform chero bedzi iko kuendesa kwacho kuchichengeta yavo pachavo account.
Best Online Course Kubatana Zvirongwa
Kajabi is-in-one-platform inoita kuti vashandisi vagadzire online makosi, kutanga shambadziro dzekushambadzira, kuvaka mapeji ekutora, nekugadzira webhusaiti yakanaka.
Iyo Kajabi Partner Chirongwa parizvino inongovhurika kune vashandisi veKajabi. Semubatanidzwa, iwe unogashira 30% yehupenyu komisheni yenhengo nyowani yaunounza kuKajabi iyo inogara ichishanda kupfuura nguva yavo yekutongwa. Uyezve, iwe uchaitirwa kurapwa kune akakosha mibairo paunenge uchifambira mberi. Nhanho yega yega inovhura mabhonasi anonakidza anongowanikwa kuKajabi Partner.
Coursera inopa pamusoro pezviuru zvezviuru uye nyanzvi kubva kune chero Dhijitari Kushambadzira kusvikira Kugadziriswa Dhata reSainzi uye Kubudirira Kwemunhu. Imwe neimwe kosi ine pre-rekodhi mavhidhiyo, mapikicha, uye basa.
Chirongwa cheCourseera chekubatana chinomhanyisa paInternet share uye chinopa komisheni inotangira pa20% kusvika ku45% nemabhonasi ekushanda kwakasimba. Makosi uye Specializations zvinowanzo mutengo pakati pe $ 29 ne $ 99. Semubatanidzwa weC Coursera, iwe unowana mukana kune zvine hunyanzvi-zvakagadzirwa mabhanhire uye yemwedzi nemwedzi yakabatana nhaurwa ine yakarongedzwa zvemukati kurudziro.
Inodzidziswa inokubatsira iwe kugadzira uye kutengesa akanaka epamhepo makosi. Nevadzidzi vanopfuura mamirioni gumi nemasere uye makosi zviuru mazana masere nemakumi matanhatu neshanu, Inodzidziswa ndeimwe yemapuratifomu ane mukurumbira e-kudzidza. Uyezve, inotsigirwa zvakanyanya naPat Flynn kubva Smart Passive Income.
Kutenderera kubva kuFacebook kushambadza kune keke yekushongedza matipi, Inodzidziswa inokodzera dzakasiyana siyana niche zvidzidzo. Inodzidziswa's chakabatana chirongwa chinobhadhara chadzokororazve 30% komisheni pane yekuendesa's pamwedzi kubhadhara muripo. Zvirongwa zvinogona kuenda chero kubva $ 29 kusvika $ 499 pamwedzi, zvichireva kuti uchakwanisa kuwana kusvika kumadhora zana nemakumi mashanu pamwedzi pakutengesa.
Yakanakisa Webhusaiti Inovaka Zvirongwa
komisheni: 200% kana $ 1,500 pamabhizimusi vatengi
Yakatangwa muna2009, BigCommerce inovakwa yepamhepo muvaki iyo inopa simba zviuru zve e-commerce zvitoro munyika dzinopfuura zana. Iyo inoshanda akasiyana siyana maindasitiri, kusanganisira fashoni, mota, kugadzira, chikafu, uye hutano.
Paunotarisa vashanyi kuBigCommerce, iwe unowana 200% yemutengi wekutanga kubhadhara pamwedzi (zvinosvika kumadhora mazana mashanu nekutumirwa!), Kana $ 500 pamabhizimusi emutengi.
ne anopfuura 500,000 Shopify zvitoro pasi rese, Shopify yakanyatsozviratidza semutungamiri wemusika mune yekudonha indasitiri. Shopify ine zvese zvaunoda kuti utange yako online shopu, kusanganisira vanogadzira webhusaiti, zvitoro zvinotengesa, webhu inowona nezvitoro manejimendi zvekushandisa, analytics maficha, kubhadharisa kubhadhara, uye zvimwe zvakawanda.
Kana vateereri vako vese vari nezve e-commerce uye vachida rubatsiro kugadzira chitoro chepamhepo, Shopify's affiliate chirongwa chingangove chako. Vabatanidzwa vanowana kubhowa 200% komisheni pamutengo wemubhadharo wemwedzi wega (izvo zvinosvika kumadhora 2,400!). Pamusoro pezvo, kana kutumirwa kukasaina kuShopify Plus account, iwe unobhadharwa rakapetwa $ 2,000 bounty kubhadhara.
Pamusoro pemari, seShopify vanobatana, iwe unowana rutsigiro rwemberi kune chako chitoro cheShopify, pamwe nemahara Shopify yezvinyorwa kusimudzira kune vateereri vako.
Kubatana nechirongwa ichi zvachose mahara. Zvikanganiso zvakakura zvinogona kunge zviri zvekuti chinangwa cheichi chirongwa chakanyanya niche, sezvo iwe uchizoda vateereri vanotengesa zvigadzirwa pamhepo uye haisati yatove yakasimba e-commerce chikuva.
Cookie hupenyu: 45 mazuva
3dcart ndiyo e-commerce chikuva ine yakanyanya kutarisa SEO. Inokupa iwe zvese zvekushandisa zvaunoda kuvaka, kusimudzira, uye kukurudzira yako online shopu. Vashandisi vanogona kushandisa 3dcart kutanga bhizinesi repamhepo, kuwedzera ngoro yekutenga kune iripo saiti, kana kutsiva yavo yazvino yekutenga ngarava pachikuva.
Vanobatana vanowana 300% Commission kune wega mutengi anotaurwa - inova inosvika kumadhora mazana matanhatu nemakumi manomwe nenomwe pakufambiswa. Yadzo yekubatana chirongwa inomhanya pane ese ari mairi Commission Junction uye ShareASale network, uye ese ari maviri anopa zvakafanana komisheni uye hupenyu hwecokie, saka zviri kwauri kuti usarudze kuti ipuratifomu yaunofarira zvakanyanya.
Volusion ndiyo e-commerce solution inogonesa mabhizinesi madiki kugadzira, kubata, uye kuwedzera zvitoro zvavo zvepamhepo. Ivo vanopa vatengi kutumira kunze kuti vabetsere nhanho dzese dzenzira, kusanganisira rubatsiro nekutenga kwemawadhi, webhu dhizaini, kusanganisa ngoro, SEO, uye chengetedzo.
Vanobatirana vanobhadharwa 200% Commission pamutero wekutanga wevatengi wemwedzi, iyo inogona kutangira chero kubva pamadhora 29 kusvika kumadhora 299 (kana, kuenda zvakatokura nePrime tsika yavo tier). Semubatanidzwa, iwe unowana mukana wekushambadzira zvinhu kuti ubatsire mukushambadzira kwako kuedza.
Yakanakisa Webhu Saiti Kubata Zvirongwa
komisheni: $ 200 + pamasaini
Cookie hwindo: 180 mazuva
Kune mamiriyoni emawebhusaiti pawebhu, uye 30% yavo yakavakirwa paWordPress. WP Injini inopa yakakurumidza-kukurumidza kuwebhusaiti zviuru zveWebhusaiti ewebhu kutenderera pasirese.
WP Injini yekudyidzana chirongwa inomhanya pane ShareASale network. Nekusimudzira zvirongwa zveWP Injini, unogona kuwana $ 200 pakusaina kana 100% yemutengi wekutanga kubhadhara pamwedzi - chero iri kumusoro. Iwe unowana mukana kune yakasarudzika yakabatana zvidzikiso iwe zvaunogona kupa kune vateereri vako.
Iwe unogona zvakare kusimudzira StudioPress madingindira uye uwane 35% yekutengesa kunogadzirwa. Izvi zvinotengwa zvinowana mazuva makumi matanhatu ekutsvaga kuki.
Izvo zvakakosha kuti uzive - WP Injini chirongwa chekubatana chine maviri-tiered, zvinoreva kuti iwe unozobhadharwa kwete kwete chete zvekureva vatengi, asiwo nekutarisa vanobatana. Iwe unowana $ 50 kune yega yega yavanotumira.
Kunyange zvingave zvisiri nyore kuwana vateereri vari kutsvaga kuvaka webhusaiti itsva yeWebhu, paunowana avo vashandisi, iwo mapundutso anogona kuve makuru.
komisheni: Kusvikira kumadhora mazana mashanu pakudzoserwa + 500% kudzokorora
Cookie hupenyu: 60 mazuva
Kinsta aive yakavambwa muna 2013 naVeteran WordPress vanogadzira "Nechishuwo chekugadzira yakanakisa WordPress yekutambira chikuva munyika." Ivo vanovavarira kupa WordPress kuitisa iyo inokurumidza, yakachengeteka, uye yakavimbika.
Kinsta's yakabatana chirongwa chinobhadhara kutanga komisheni, ichiteverwa neyakajairwa 10% pamwedzi kubhadhara. Vanobatana vanogona kuwana kusvika kumadhora mazana mashanu pakutanga, zvinoenderana nerudzi rwechirongwa chaatumirwa nekutumira:
Starter: $ 30
Bhizinesi: $ 150
Kunyangwe 10% isingaratidzike kunge yakawanda, zvaunotumirwa zvinogona kunge zvine hurefu hwehupenyu hwese, nekuda kweKinsta yakakwira yekuchengetwa kwevatengi chiyero che95%.
komisheni: 300%, kusvika kumadhora mazana mashanu pakudzosera
Seimwe yakatsaurwa WordPress yekugadzirisa mhinduro, Flywheel inovavarira kubvisa zvese zvinonetsa zvinouya newebhu kubata kuitira kuti vashandisi vatarise pakuita zvavanoita zvakanyanya - kugadzira nekugadzira mawebhusaiti.
Flywheel vanobatsirana vanogona kuwana kusvika kumadhora mazana mashanu pane kutumirwa. Iwe unowana mukana wematani emidziyo yekugadzira, kubva kumabhanhire kuenda kune emhando dzakatemwa mapeji emifananidzo kune yakajeka mifananidzo yemagariro. Flywheel timu ichatoshanda newe kugadzira tsika mifananidzo inogona kutora makomisheni ako kunhanho inotevera.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti hapana pasipasi muganho muganho wekugamuchira mubhadharo.
komisheni: $ 65 nekutengesa
Bluehost, webhu inomiririra chikuva iyo inotsigira anopfuura mamirioni maviri mawebhusaiti, inopa inoshamisa inoshamwaridzana chirongwa che chero bhizinesi kana muzvinabhizimusi anotarisa kuita mari yavo blog kana webhusaiti. Kana iwe uchisimudzira zvigadzirwa zveBluehost kana masevhisi pane yako wega blog kana webhusaiti (kungave kuburikidza netsika mireza kana zvinongedzo), iwe unogona kuwana chero kupi kubva pamadhora 2 kusvika $ 65 pakutengesa kwakagadzirwa kubva pawebhusaiti yako - mubhadharo unoshamisa kwazvo.
Zvakanakisisa pane zvese, zviri mahara kujoina chirongwa chavo chekubatana, uye Bluehost inopa yakavimbika yekutevera kuti uve nechokwadi chekuti unowana kiredhiti kumutungamiriri wega wega waunovapa. Uyezve, Bluehost inopa vanobatana mamaneja vanogona kupa rutsigiro kana munhu zvichienderana zano.
komisheni: $ 65 kusvika pamadhora mazana matanhatu nemakumi mashanu pamasaini
Hostgator inopa zvese zviri zviviri webhusaiti uye zvekushandisa zvekuvakira, uye zvakanyanyisa kuderera-mutengo wekutanga kana ecommerce mabhizinesi ane mashoma bhajeti - semuenzaniso, chirongwa chemitambi chinongotenga madhora 3.84 / mwedzi.
Zviri mahara kuve mubatanidzwa weHostgator, uye mafaera avo akakwenenzverwa akakosha - unogona kuita $ 65 pakusaina kana iwe ukapa Hostgator nemasaini 1-5 pamwedzi, uye kusvika kumadhora mazana masere nemana kusaina kana iwe uchipa iyo Hostgator neanopfuura makumi maviri nemaviri signups. Iwe unogona kana kupinza inoteedzera maratidziro pane yako saiti kana kugadzira yakasikwa coupon kodhi. Sezvo Hostgator ichipa 125 zuva rekudzosera mari gurantee, iri panjodzi yakaderera kune vako vashanyi vewebhusaiti kuti vayedze.
komisheni: $ 50 yekutengesa kamwe chete; anosvika kumadhora zana ekutengesa matanhatu
GreenGeeks, eco-inoshamwaridzika, yakachengeteka webhu yekutambira chikuva, inokutendera iwe kuti uwane mari inosvika kumadhora zana pakutengesa. Ivo vane tiered chirongwa icho chinobhadhara nerupo - kusanganisira $ 100 yekutengesa kumwe chete, uye $ 50 kwematanhatu kana kudarika. Pamusoro pezvo, kambani inopa sarudzo yezvakagadzirwa, zvemukati, uye zvikwangwani kuti uve nechokwadi chekuti unodada neiyi link kana banner iwe yaunosanganisira pane yako webhusaiti kana blog.
Kana iwe uchidavira kuti vaverengi vako veblogiti kana vashanyi vewebhusaiti vanofarira kuongorora mapuratifomu ekubatira webhu (semuenzaniso, kana iwe ukanyora zvemukati zvemahara), iyi inogona kuve yakanaka sarudzo yekuongorora. Zvakanakisisa pane zvese, kambani inokurudzira dzimwe nzira dzakanaka, saka unogona kunzwa zvakanaka uchiziva kuti urikuparadzira yakanaka, "giridhi meseji" kune vako vashanyi vesaiti.
komisheni: $ 100 pamutengo wekutanga
Kana iwe uchifarira muganho wekubhadhara uine mashoma mashoma, Wix inogona kunge iri yako. Iyo webhu yekuvandudza kambani ndeimwe yeiyo anonyanya kufarirwa webhu anotambira mapuratifomu, uye inopa $ 100 paPrimiyamu kutumirwa pasina muganho pauwandu hwevanhu vaunogona kureva (zvinoreva kuti, kana iwe uchinongedzera vanhu gumi, watoita $ 10 1,000). Pamusoro pezvo, Wix inopa zvinongedzo uye zvisikwa, zvinosanganisira mabhanji uye mapeji ekumhara mumitauro yese, kuti zvive nyore kwauri kuti ubatanidze yavo link pane yako saiti.
Nekudaro, zvakakosha kuti uzive, pane hushoma hwekutengesa tarisiro iwe yaunofanirwa kusvika kuti ubhadharwe - $ 300 pamwedzi (kana iwe ukaita isingasviki pane iyo, yako yaunowana inogara muakaunti yako kusvika iwe wasvika iyo bhenji. Kana iwe uchinzwa yako webhusaiti, blog, kana gwara renharaunda inoshanyirwa nguva dzose netarisiro vanogona kuve vanofarira kugadzira yavo webhusaiti papuratifomu yekutambira, ichi chingave chirongwa chakanakira iwe, asi kana usina chokwadi kana inogona kusangana nemimimum yekutengesa tarisiro kwechinguva, ungangoda kufunga zvakare.
Yakanyanya Retail Kubatana Zvirongwa
Disiki: Iwe unozoona kuti makomisheni ezvitoro ezvitoro zvidiki zvakanyanya pane izvo zvinopihwa neB2B nekuti mutengo wekutenga uri mudiki kwazvo. Asi izvi zvakare zvinoreva kuti zviri nyore kuti vateereri vako vatenge izvo zvinhu (yakaderera mutengo = yakaderera kuzvipira), iyo inogona kushandurira kuita yakakwira shanduko mitengo uye yepamusoro kudzoka.
komisheni: 1-10% (zvinoenderana nechikamu chechigadzirwa)
Cookie hupenyu: 24 maawa
Amazon ndeimwe yemapuratifomu anozivikanwa online ekutenga, saka kana iwe uri kutsvaga kutenga chimwe chinhu, mikana iwe uchaiwana paAmazon.
Amazon Associates inobhadhara komisheni pakati pe1% ne10%, zvichienderana nechikamu icho chigadzirwa chakatengwa chinowira pasi. Izvo zvinonyanya kukosha zvinhu kusimudzira zvipfeko uye runako runako zvigadzirwa, zvese izvo inokuwanisa iwe 10% yakatemwa pamutengo.
Imwe yemabhenefiti akakosha ekushambadzira kwakabatana neAmazon ndeyekuti vanhu vanotoziva iyo kambani uye vanoda kutenga ipapo, saka haisi yakaoma kutengesa. Iyo kambani ine yakanyanya kukwirisa mitengo yekutendeuka, kunyanya kutenderedza mazororo. Uye nekuti kusarudzwa kwechigadzirwa kwakakura kwazvo, inokodzera mhando zhinji dzemabhizinesi.
Kana iwe ukanyora nezve mhuka, semuenzaniso, unogona kusimudzira kubata kwekati kana imbwa matoyi. Kana vateereri vako vachifarira mota, unogona kukurudzira tambo dzejumper - iwe unowana iyo pfungwa.
Pamusoro pezvo, kana mumwe munhu akazoguma paAmazon kuburikidza neiyi link uye otenga chimwe chinhu kunze kweicho chako chemukati chinobatanidza, iwe uchiri kuwana komisheni pane yemushandisi ose ngoro.
Pakupedzisira, iyo yega yedivi mamwe mapoka ane kunyanya kuderera makomisheni, senge mitambo yevhidhiyo nemagetsi.
Kune emabhizinesi ane vateereri vakawanda, Amazon ichangobva kuburitsa yavo itsva Amazon Influencer Chirongwa sekuwedzera kune iyo Associates chirongwa chezvemagariro enhau. Iwe unowana zvibodzwa zvakafanana kuhurongwa hweInternet Associates, pamwe nepe peji rako paAmazon ine URL yakasarudzika kuratidza zvigadzirwa zvaunokurudzira vateveri vako.
Parizvino, unofanirwa kunge uine YouTube, Instagram, Twitter, kana Facebook account kuti ukwanise. Amazon inotarisa huwandu hwevateveri uye mamwe ma metric ekubatanidzwa emaakaundi enhau enhau kuti uone kana iwe uchikodzera chirongwa ichi.
komisheni: 50-70% yemitengo yekutengesa (zvichienderana nechikamu chechigadzirwa)
Cookie hupenyu: Maawa makumi maviri nemana eku "tenga izvozvi" zvinhu, mazuva gumi ezve zvinhu zvekutengeswa
Iine anodarika bhirioni rondedzero kubva kune akasiyana siyana ezvigadzirwa, eBay chirongwa chekubatana chinogovana yakawanda yakawanda yakafanana mabhenefiti seAmazon - anozivikanwa, akakwirira ekushandura mwero, uye akasiyana akasiyana sarudzo yezvigadzirwa.
Iyo eBay Partner Network inobhadhara komisheni ye50% kusvika 70% yemari yemikoko - kwete mutengo wekutengesa. Kune chimwe nechimwe chinhu chakatengeswa, eBay inowana kucheka nekuchaja mutengesi mari yechaction. Iwe unobva wawana muzana yezvemari eBay inowana kubva pakutenga ikoko, zvichibva muchikamu chechigadzirwa.
Yakakwira-tikiti zvinhu zvekusimudzira ndeavo vanowira pasi pezvikamu & zvishongedzo, kana Fashoni. Iwe unogona kutarisa pane yakazara mwero kadhi pano.
komisheni: 1-8% (zvinoenderana nechikamu chechigadzirwa uye vhoriyamu yekutengesa)
Cookie hupenyu: 7 mazuva
Kunyangwe iyo isingapi seakasarudzika sarudzo seAmazon kana eBay, Target inoramba iri inozivikanwa zvikuru mhando ine dzakasiyana siyana zvigadzirwa.
Target's chakabatana chirongwa chinoshanda pane a vhoriyamu-yakavakirwa komisheni dhizaini, zvichireva kuti komisheni yako inowedzera sezvo huwandu hwezvinhu zvakatengwa zvinowedzera. Zvinosuruvarisa, chikamu chechigadzirwa chisingabatsiri kubva pamuenzaniso uyu ndewe Hutano uye Runako zvigadzirwa - iyo khomisheni pane ino chikamu inobata pa1%, zvisinei nehuwandu.
Zvakakoshawo kucherechedza - vanhu vazhinji vanowanzo sarudza kutenga zvigadzirwa zveTarget mu-munhu, pane kuita online, saka izvi zvinogona kukanganisa kukudzoka kwako.
komisheni: 8% pane chero kutengesa
Hammacher Schlemmer ndiyo yakarebesa-inomhanya katalog yeAmerica ine hupenyu hunopfuura makore zana nemakumi mashanu, uye inoramba ichitengesa zvinobudirira zvinhu zvichibva pamagetsi kuenda kunzvimbo yekunze. Pamusoro pezvo, kambani iyi inopa inoshamisira chirongwa chekubatana pamwe nekwanisi yekuwana zvakanyanya kusimba makomisheni.
Ivo vanopa 8% Commission pane chero chigadzirwa iwe chaunogona kutengesa kuburikidza neyako webhusaiti kana blog. Kunyange 8% inogona kunge isinganzwike kunge yakawanda, funga zvimwe zvezvinhu zvepamusoro-zvemutengo zvavanotengesa, kusanganisira Muhammad Ali Autographed Photo Collage ye $ 5,000, kana iyo Full Imersion Professional Racer's Simulator ye $ 65,000.
Pakupedzisira, kana iwe uchikwanisa kuwana zvigadzirwa kana masevhisi pane webhusaiti yaHammacher Schlemmer inoenderana zvakanaka nezvako zvepamoyo kana zvinogona kufarira mutengi wako persona, unogona kufunga kubatana nekambani.
Pamusoro pezvo chirongwa ichi chakabatana chinogona kunge chiri pfungwa yakanaka kune bhizimusi re ecommerce rinofarira kuwedzera zvipiriso zvavo. Hammacher Schlemmer inopa zvishandiso (zvinosanganisira password-zvakadzivirirwa pamishumo yepamhepo) uye zvirimo kubatsira yako online shopu kubudirira.
komisheni: 20% pamunyoreri weBhuronzi; 25% pamunyoreri weSilver; 30% pamunyori weGoridhe (kusvika 445.50 pamunyoreri)
Spocket, anodonhedza anodonhedza pasi, mutengesi, uye muparidzi wemhando yepamusoro United States uye zvigadzirwa zveEuropean, zvinogonesa vemabhizimusi kusarudza zvigadzirwa kuti vatengese kubva kuzviuru zvevanodonhedza vanotengesa pasi rese. Ivo zvakare vanopa inoshamisa inoshamisa yehukama chirongwa - unogona kuita inosvika kumadhora mazana mana nemakumi mashanu kumutengi wega wega iwe waunowana weSocket, uye iwe ucharamba uchingounganidza komisheni kubva kune yako yaunotumira Spocket account chero bedzi ivo vachiramba vari mutengi.
Chirongwa chavo zvakare chinokupa iwe maturusi uye zviwanikwa zvaunoda kuti ubudirire kusimudzira bhizinesi ravo. Kana vashanyi vewebsite yako vari mabhizinesi kana ecommerce mabhizinesi, ichi chirongwa chakabatana chekuti uongorore.
Kunakisa Runako uye Zvimiro Zvekubatana Zvirongwa
Howard Murad, MD akapa hupenyu hwake kusainzi yekuchengetedza ganda, uye ari mumwe wevakuru venyika vane masimba ekuchengetedza ganda. Mushure mekurapa vanhu vane zvinetswa zvakasiyana zveganda, akatanga kuvandudza mafomula akanangwa ekurapa mamiriro eganda. Nhasi, Murad ndeimwe yemakambani anotungamira muzvigadzirwa zvekuchengetedza ganda, uye inozivikanwa mukurapa kwayo acne, anti-kuchembera, cellulite, zera nzvimbo kurapwa, uye nezvimwe.
Murad's yakabatana chirongwa chinobhadhara 11% mumakomisheni. Iine avhareji odha saizi yemadhora makumi mapfumbamwe, vanobatana vanogona kutarisira kuwana padhuze ne $ 90 nekutumira. Iwe unopihwa ane simba mireza uye zvinyorwa zvemavara kusimudzira Murad zvigadzirwa. Iyo kambani ine kuenderera-mberi kusimudzira, kusanganisira yemahara kutumira uye zvigadzirwa zvemahara, kuti ikubatsire kutyaira kwakawanda kutengesa.
Yves Rocher anopa yakasarudzika sarudzo yezvigadzirwa zvemabhodani, kusanganisira ganda & kutarisirwa kwemuviri, zvigadzirwa, uye zvinonhuwira. Pamusoro pezvo, ivo vanopa ruzivo rwepamusoro rwevatengi - semuenzaniso, ivo vanopa chipo chemahara nekutenga chero kupi.
Yves Rocher's yakabatana chirongwa chinopa nerupo 15% komisheni rate pane zvese zvekutengesa (inova iri yakakwira mwero munzvimbo yekutengesa B2C nzvimbo). Kufanana nezvirongwa zvakawanda, vanobatana vanowana mukana wekusimudzira mabhana uye zvimwe zvekugadzira zvinhu zvekushandisa pane avo masosi uye maakaunzi enhau.
komisheni: $ 14
Akazvarwa nekushushikana nemabhodhoro emafuta anonhuwirira anodhura achiunganidza guruva pane mupfeki kana kabhineti, Scentbird inopa sevhisi yekunyorera sevhisi iyo inokupa iwe kuwana kune 30-zuva kupihwa kweanopfuura mazana mana emakumi mashanu emhando yepamusoro yezvinonhuwira. Iyo yekunyorera sevhisi inokurega iwe "zuva" zvinonhuwira usati wazvipira kune "kuvaroora" ivo.
Vakabatana vanowana madhora gumi nemana kutengesa kwese kunonyorwa kunogadzirwa kuburikidza nekubatanidza kwavo uye kunopa mukana wekubatanidzira uye mabhana, nyowani blog zvinyorwa, mwaka wezvemhepo, uye coupon macode kuvabatsira kuti vaite zvakanakisa kugona kwavo.
33. BH Zvizoro
Akazvarwa uye akarerwa mu LA, BH cosmetics ndeimwe yemakambani anotungamira muindasitiri yerunako. Ivo vanofarira nezvekugadzira mutsva uye mutsva runako maitiro uye akazvitsaurira kuunza vatengi zvakanakisa muutsinye-husina mafuta cosmetology. Ivo vanomhanyisa kukwidziridzwa uye kutengesa nguva zhinji kubatsira kushandura izvo zvinotungamira.
BH Cosmetics vanobatana vanogamuchira 8% Commission pakutenga kwakaitwa mukati memazuva makumi matanhatu kushanya kwemushandisi. Iyo saiti ine avhareji odha kukosha kwe $ 60 uye pane-saiti kutendeuka mwero we38%.
Semubatanidzwa, iwe unowana mukana wega wekusvika kumakoponi nemabhanhire aunogona kushandisa pane webhusaiti yako, blog, kana maemail. Iwe zvakare unogashira yemwedzi nemwedzi yakabatana matsamba. Uyezve, yavo yakazvipira-mumba vanobatana timu inomhanya zvinokurudzirwa pamwedzi uye makwikwi ehukama kukurudzira iwe kuti uite pane zvaunogona.
Zvakanakisa Zvirongwa Zvekufambidzana Zvekufamba
komisheni: 20% + 10% yevatengi vanodzoka
Kana iwe uchifunga kuti vashanyi vewebhusaiti yako vanogona kufarira kucharting yachts, ungangoda kujoina Boatbookings 'yakabatana chirongwa. Boatbookings inonyanya kugadzirisa yakasarudzika yacht chartering, kukwereta chikepe, uye kufamba nechikepe & mota yacht zororo.
Pamubhadharo wechikepe, Boatbookings inogamuchira komisheni pamutero wetera mutengo (kwete kusanganisira APA kana chero zvimwe zvinhu zvakarairwa). Pane komisheni iyi, vanobatidzana vanowana makumi maviri muzana seyero rezasi, pamwe nekukwira kwemitengo yekukwira kana vachidudza vatengi vakawanda. Kana vatengi vachidzokera Boatbookings, vanobatana vanowana imwezve 20% komisheni pakutenga kwechipiri.
Cookie hupenyu: Chikamu
Yakafemerwa "nzvimbo yepasirese yekufambisa", TripAdvisor inopa vafambi huchenjeri hwevanhu vazhinji kuvabatsira kusarudza pekugara, nzira yekubhururuka, zvekuita, uye pekudya. Saiti iyi inokubatsira iwe kuenzanisa mitengo kubva ku200+ nzvimbo dzekubhuka hotera kuti ugone kuwana yakaderera mutengo pahotera yakakunakira iwe.
Inotungamirwa neCommission Junction, chirongwa cheTripAdvisor chekubatana chinobhadhara 50% komisheni kubva pamari inowanikwa kubva kumushandisi kudzvanya pane zvinongedzo uye / kana shambadziro dzinovatumira kune yavo TripAdvisor shamwari saiti. Zvinoreva kuti, kusiyana nemamwe mapurogiramu akabatana mune ino runyorwa, haufanire kumirira kutumira kwako kuti utenge kuti uwane komisheni yako. Kana munhu achangouya kubva pawebhusaiti yako obaya chimwe cheshambadziro kana zvinongedzo pawebsite yeTripAdvisor, unobhadharwa.
Paavhareji, vanobatanidzwa vanozowana pakati pe $ 0.15- $ 0.75 pakubuda-kunze. Kunyange zvingaite kunge zvisingaite senge yakawanda, sezvo mari yako ichingoenderana nekubiridzira (uye kwete kutenga), izvi zvinogona kuwedzera zvakanaka.
komisheni: Flat mwero - inosvika kumadhora 0.45 nekudzvanya-kunze
Mahotepaki inzvimbo yekufananidza yekufamba inobatsira vashandisi kuwana matikiti epasi ndege akadhura.
Zviturufesi ndeimwe kambani inobhadhara vanobatana nayo kwete yekuunza vatengi vanobhadhara, asi yekutumira traffic kune vavanoshanda navo.
Vabatanidzi vanobhadharwa mari yakati sandara kana mushandisi achidzvanya kuburikidza - $ 0.45 pakadzvanya-kwese kwidesktop nepiritsi, uye $ 0.25 yefoni.
Semubatanidzwa, iwe unowana mukana kune akasiyana maficha ekugadzira, kubva pamabhenji kutsvaga mabhokisi uye mafambiro mawadhi, ayo anotendera vashanyi vako kuti vatsvage pane yako saiti uye varatidze mibairo yendege pane Cheapflights 'peji. Iyi ndiyo yavo inonyanya kufarirwa yekufambisa yakabatana chishandiso uye inogadzira yakakwira mari pamushanya.
komisheni: Flat mwero - inosvika kumadhora 0.65 nekudzvanya-kunze
Momondo inzvimbo yekutsvaga yekushanya yepasi rese inofananidza nendege dzakachipa, mahotera, uye mareti emota.
Nguva imwe neimwe munhu paanodzvanya nendege pawebhusaiti yaMomondo kubva kune yako saiti chinongedzo, iwe unowana $ 0.65 kune vashandisi vepakombuta uye piritsi, uye $ 0.45 yevanoshandisa nhare.
Sandals nderimwe remazita anonyatso zivikanwa muCaribbean resort mafambiro. Iyo 15 Sandals Resorts inopa zororo rakanaka kune vaviri vakaroora uye mhuri vanofamba kuenda kuJamaica, The Bahamas, Barbados, uye zvimwe.
Iyo Sandals yakabatana chirongwa chinokubhadhara iwe komisheni yekureva vashandisi kunyorera kungave kugara mune imwe yeSandals Resorts, kana kunyorera chiitiko. Kunyange 4% ichiita senge chikamu chidiki muzana, aya emahotera emahombekombe ane mitengo yezuva nezuva inotangira pamadhora zana nemakumi mashanu kusvika pamadhora zviuru zviviri pamunhu - zvinoreva kuti, kana vaviri vaizonyoresa svondo rerudo muSandals Resort pamadhora mazana mashanu pamunhu manheru, vaizowana komisheni ye $ 150!
Iyi purogiramu inongokosha chete, zvisinei, kana saiti yako uye vateereri vaine chokwadi chechokwadi chekufamba kwakanaka kuenda kuCaribbean.
Yakanakisisa Zvemari Dzemunhu uye Investment Affiliate Zvirongwa
39. Mabhizimusi eSekuru Anoshandisa
Cookie hupenyu: 365 mazuva
Mabhizimusi ekushandisa mari zvinopa kutungamira kwekutengesa kune vanoisa mari uye chero munhu anotarisa kushambadzira musika nekugovana chete zvakanakisa mikana-yepakati / yepamusoro-mubairo mukana kune vanyoreri.
Kana vateereri vako vakanangana nevashandisi, vanhu vane mari yakawanda, vanhu vanofarira zvekudyara, vapihwa mazano ezvemari, kana hupfumi mamaneja, saka chirongwa ichi chingave chako.
Mabhizimusi Ekushambadzira anobhadhara 50% komisheni pane chero yakatengeswa yekutengesa isina zvachose miganhu. Zvigadzirwa zvavo zvinotangira pamadhora 1,575 kusvika pamadhora 3,499. Izvi zvinoreva kuti chimwe nechimwe chinotakurirwa chinounza kwauri madhora mazana manomwe nemakumi manomwe nenomwe. Vakabatana zvakare vanogashira yakakwana kuwana kune inobhadharwa miedzo yemitezo yevateereri vako.
komisheni: $ 250 pamutobvu unokwanisa
Kabbage inobatanidza mabhizinesi madiki kune capital. Varidzi vemabhizinesi madiki vanogona kunyorera mari inosvika kumadhora mazana maviri nemakumi mashanu pamubatsiro.
Vanobatirana vanogashira madhora mazana maviri nemakumi mashanu emadhora kune wese mutengi anotaurwa anokodzera chikwereti, uye vanowana imwezve $ 250 kana kutumirwa kuchinge kwabvumidzwa. Bhizinesi rega rega raunoreva rinogashira imwe $ 50 kadhi rechipo kana vangotenderwa naKabichi. Iko hakuna muganho kune iyo nhamba yekutumira iwe yaunogona kugadzira, kana iyo mari yaunogona kugamuchira.
41. Sage Vezvemari
komisheni: $ 10 pamwedzi yekutengesa Cloud, madhora manomwe ezvese zvimwe zvekutengesa, $ 7 yemahara muyedzo
Sage Financials, yefu accounting solution yakavakirwa paSoftforce inopa accounting, analytics, uye zvekushandisa maturusi emabhizinesi madiki nepakati, ine chirongwa chinoshamisira chehukama icho chinosanganisira timu yakazvipira yekutsigira, komisheni inobhadharwa zvakananga mubhangi rako rebhangi (uye mari ye sarudzo), uye rondedzero yekutaurira nezvekuita kwako uye zvaunowana.
Zvakanakisisa pane zvese, iwe unokwanisa kugamuchira komisheni kunyangwe kubva mahara kusaina-kumusoro Sage inogamuchira kubva kune yako webhusaiti kana blog. Kana iwe uchinzwa vako vashanyi vewebhusaiti kana vaverengi veblogi vari kufarira maturusi ekuverenga, izvi zvinogona kuve kudyidzana kwakanaka kwekuongorora.
komisheni: 50% pane ese anotumirwa kwemakore mana
Cookie hupenyu: N / A; pachinzvimbo checookie, Invoice Ninja inoteedzera nekugadzirwa kweakaundi kubva kuhumbo URL (yemakore mana)
Invoice Ninja, yemahara yakavhurika-sosi invoice app yevanoshanda mahara uye mabhizinesi, inopa iyo Ninja Pro Chirongwa yemadhora gumi chete pamwedzi - uye, semubatanidzwa mudiwa, unogona kuita 10% pane ese anotumirwa kwemakore mana. Izvi zvinoreva, kana iwe uchireva vashandisi vePro zana, iwe unogashira madhora zviuru zvishanu gore rega rega kwemakore mana anotevera.
Pamusoro pezvo, chero mushandisi anogona kutanga mahara uye kusimudzira pavanofunga kuti zvakakosha, saka zviri nyore kune vako vesaiti vashanyi kupa chimbo kuedza. Iwe unogona kupa yavo yakabatana chinongedzo mune yako email siginecha, pane blog posvo, kana mune email tsamba, uye Invoice Ninja inopa zvese marogo nemashambadziro kuti zvive nyore kusimudzira chishandiso chavo. Kana vateveri vako vezvemagariro kana vashanyi vewebhusaiti vari vanowanzo vezvinabhizimusi vepamhepo kana ma freelancers, uku kunogona kuve kudyidzana kwakanaka kwekufunga.
Pakupedzisira, kana uchisarudza kuti ndeyipi chirongwa yekusarudza, pane zvakawanda zvakakosha zvekuisa mupfungwa, zvinosanganisira kuti yakamiswa sei yako online yekutevera iri, uye kuti yakawanda sei yaunoda kuwana.
Uye, zvakanyanya kukosha - vateereri vako ndiani, uye vanofarira chii?
Funga nezve izvo vashanyi vewebsite yako kana vateveri vako vezvenhau vanoda uye zvavanogona kubatsirwa nazvo, uye sarudza chakabatana kushambadzira chirongwa chinokurega uchisimudzira zvigadzirwa mukutsigira izvozvo.
Iwe unogona zvakare kuda kufunga nezvehukama hwakabatana network LinkShare or CJ Affiliate izvo zvinopa akawanda akasiyana masarudzo kusarudza kubva. Iko hakuna miganhu kune nhamba yemapurogiramu ekubatana iwe aunogona kujoina.
Yakanyanya Kubhadhara Webhu Inobata Zvirongwa
Kudzokorora kwe5 Best African Affiliate Networks